IOS 12 mapfupi: Zvese zvaunoda kuti uzive mune ino chaiyo gwara | IPhone nhau
IOS 12 Mapfupi: Zvese zvaunoda Kuti Uzive mune Iri Rinotsanangurwa Nongedzo
Shortcuts ndeimwe yezvinyorwa zvitsva zvinonakidza zvakabuda panguva yekutanga kweIOS 12, ndiko kusangana pakati peiyo Workflow yekare uye muhondo Siri, nzira yekuita kuti hunhu hwese huve nehungwaru uye pamusoro pezvose zvinyatsobatsira isu vashandisi veIOS venguva dzose. Nekudaro, kune vashandisi vanga vasina hukama neiyo ikozvino isingachashandi Workflow application iyi "Shortcuts" Zvinogona kurira kunge zvakaoma, asi usazvidya moyo, iPhone News yauya kuzokubatsira.
Isu tichaenda kukuudza izvo iOS 12 Mapfupi ane uye nekukuratidza iwe neino gwara gwara maitiro aunowana zvakanyanya kubva kune ino nyowani iOS application. izvo zvichaita kuti hupenyu huve nyore kwatiri.
1 Chii ichi nezve mapfupi?
2 Ndingawedzera sei mapfupi matsva?
3 Ndingaite sei kuti ndigadzire yangu yekudimbudzira?
4 Ndingaite sei kuraira Siri kumhanya Mapfupi?
5 Ndedzipi nzira dzakasiyana dzekumhanyisa nzira pfupi
6 Ndingawane kupi nzira dzakanakisa dzeIOS 12?
Chii ichi nezve mapfupi?
Shortcuts iwo anongoshanda mafashama, kureva kuti, tichazodzidzisa iyo iPhone matanho api aunotevedzera kuita chimwe chiito, zviri nyore uye kuti tinoita nguva zhinji, saka iyo iPhone ichaita mabasa aya patinotanga nzira pfupi kuburikidza neiyo mashandiro ekuita kuti isu takasarudza. Imwe yedzidziso dzeShortcuts ndedzechokwadi kuti tinogona kumisikidza mirairo yezwi kuburikidza iyo Siri ichaita mapfupi atakambogadzira mukushandisa. Iyi inzira yekumanikidza Siri kuti aite mabasa ayo aimboita kare.
Muenzaniso ndewekuti tinogona kugadzirira Shortcut yekudzima kwese kusabatika kweasina waya patinoudza Siri kuti "inguva yekurara." Uyu unongova muenzaniso mumwe wemabasa mazhinji atichakwanisa kuita kuburikidza nemaPfupi, zvisinei, pachave nemamwe akawanda atinogona kugadzirisa maitiro ekurodha mavhidhiyo eYouTube zviri nyore uye asingakwanise kukumbirwa kuburikidza naSiri, ngatitarisei kune kugona uku.
Ndingawedzera sei mapfupi matsva?
Iko kunyorera kunosanganisira dzimwe nzira dzakatsanangurwa, zvisinei tinogona kuwedzera zvimwe zvakawanda, uye mikana yacho haigone.
Shortcut gallery: Mukati mekushandisa pachayo tine gallery iyo Apple yakagadzira iyo inosanganisira mapfupi ayo kambani yeCupertino yakaona yakakodzera kuita kuti hupenyu hwedu huve nyore.
Tumira mapfupi kubva kune ekunze masosi. Tinogona kuendesa nyore nzira pfupi ingave nekuti isu takaigamuchira kuburikidza neICloud link kana nekuti inowanikwa pane chero peji rewebhu kana sevha yatinowana.
Gadzira edu mapfupi: Kana iwe uine hunyanzvi hunodiwa, unogona kugadzira ako mapfupi ekugadzirisa zvaunoda iwe semushandisi.
Ndingaite sei kuti ndigadzire yangu yekudimbudzira?
Iyo iOS 12 Shortcuts chishandiso chine system iyo ichatibvumidza isu kuti tigadzire isu pachedu mapfupi, nekuti izvi isu tinongofanirwa kutevedzera anotevera matanho atinozokuudza iwe pazasi, zvisinei, Chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti iwe utange kuzvinyudza mune irwo ruzivo rwunodiwa kujekesa mafomura aya, uye pamusoro pezvose ita shuwa kuti maapplication atinoda kukumbira aripo.
Isu tinoenda kunyorera nzira dzeKfupiso uye tinya pane "+" icon mukona yepamusoro yekurudyi
Isu tinoshandisa injini yekutsvaga kusarudza basa ratiri kuda kuita, isu tinotsvaga "tora kubva kubhodhi clipboard" mune yekutsvaga injini
Iye zvino tava kutsvaga «Dudziro yemavara neMicrosoft» muinjini yekutsvaga uye mune yekutanga nhanho tinoisa Kubva «Tsvaga Mutauro» kuenda «Spanish»
Bata sarudza "Gadzira chinyorwa" kuti ugadzire katsamba kwatiri muapp patinowana dudziro.
Zvino izvo izvo nzira yekudimbudzira ichaita kutora izvo zvatakateedzera kubhodhi clipboard uye kugadzira chinyorwa pamwe neshanduro Pedzisa muKunyora kunyorera. Zviri nyore izvo, isu tinongofanirwa kusarudza chero chinyorwa, rova ​​"Copy" uye mhanyisa iyi nzira pfupi kuburikidza nechishandiso kuti igone kuturikirwa kwatiri munguva pfupi.
Ndingaite sei kuraira Siri kumhanya Mapfupi?
Iyi ndiyo sarudzo inonakidza kwazvo. Mune chero nzira yekupfupisa isu tinongofanirwa kupinda kuti tiigadzirise nekudzvanya pane icon «...» padhuze nepfupi uye mune yekutsvaga injini isa «Wedzera kuna Siri«, Ipapo rudzi rwekurekodha ruchazarura runotibvumidza kunyora rairo yezwi ichaita iyi nzira pfupi yatakatomisikidza kare. Aya ndo maitiro atinga "gadzire chaiwo mubatsiri akangwara" kubva kuCupertino kambani.
Zvakakosha kuti tizive izvozvo kwete ese maapplication uye ese mapfupi ane kugona kuapa iwo kuna Siri izvozvi, saka isu tinofanirwa kuve nemoyo murefu padiki pavanenge vachivandudza nekuvandudza maficha, zvisinei, Siri zvakare ine zvawo mazano ekuti tiite.
Ndedzipi nzira dzakasiyana dzekumhanyisa nzira pfupi
Pane nzira dzinoverengeka dzakapihwa neApple kune vashandisi veIOS kuitira kuti vakwanise kuita nekukurumidza uye nyore nzira yavo nzira pfupi. Izvi ndizvo zvazvinotipa:
Kuburikidza nechishandiso pachacho Shortcuts: Kupinda Shortcuts application uye kudzvanya pane iyo yatinofanira kuitisa
Kuburikidza neWidget yeiyo Shortcuts application: Kana tikadhinda kwenguva yakareba kumisikidza iyo 3D Kubata basa muPfupi, ichavhura iyo rondedzero yeMapfupi atakatsanangura.
Through the Widget Notification Center: MuNotification Center tinokwanisa zvakare kuwedzera Widget inosanganisira edu mapfupi mapfupi, sezvinoita mamwe mafomu.
Kubudikidza Siri: Sezvatakambotaura, Siri inogona kumisa mapfupi atakatsanangura kare kugona kwayo.
Kuburikidza nemenyu "Goverana": Tinogona kuwedzera Mapfupi kune mashoma «Govana mu ...» kune, semuenzaniso, kurodha zvirimo kubva kuYouTube uye chero chimwe chirongwa.
Ndingawane kupi nzira dzakanakisa dzeIOS 12?
Kana iwe uchifunga kuti izvi zvakanyanyisa kwauri, usazvidya moyo, unogona kuwana mapfupiso akanakisa eIOS 12 kuburikidza nenzvimbo dzinoverengeka kwavanochengeterwa nekurongedzwa, zvirokwazvo uchawana iyo yauri kutsvaga mune imwe yenzvimbo dzinotevera. :
Teregiramu Chiteshi cheMapfupi muSpanish
Sharecuts: Webhusaiti inosanganisira mamwe mapfupi, ari muChirungu asi akasiyana kwazvo.
Uye izvi zvese ndezvedu gwara rekutsanangudza nezve Mapfupi eIOS 12, isu tinotarisira kuti zvave kubatsira uye iwe unogona kuwana zvakanyanya kubva mazviri, goverana ruzivo rwako mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » IOS 12 Mapfupi: Zvese zvaunoda Kuti Uzive mune Iri Rinotsanangurwa Nongedzo
Gear.Club - Yechokwadi Mujaho mutambo unoshamisa wemujaho weiyo iOS
Yako iPhone XS haibhadhare kana yaiswa mukati? Vamwe vashandisi vanotanga kunyunyuta